学校紹介Myanmar語 | Another Story Human Academy
ကျောင်းသားများ၏ စကားသံ San dar min Han
ကျောင်းသားများ၏ စကားသံ San Dar Min Han ၁။ Another story human academy သင်တန်း ကျောင်းတွင် ဘယ်အချိန်ကစပြီးဘယ်အချိန် ထိလေ့လာခဲ့ပါသလဲ? Oct 2019 - Feb 2020 ၂။လေ့လာခဲ့ပါသော ဂျပန်စာ ၏ level က N4,N3 ၃။ဂျပန်စာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သော၊လေ့လာသင် ယူနေပါသော အကြောင်းပြချက်က? ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိ်ုင်ချင်ပြီး ဂျပန်စကားလဲ တတ်မြောက်ချင်တာကြောင့် Another Story Human Academy သင်တန်းကျောင်း မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၄။အခုဂျပန်ရဲ့ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပါသလဲ? Fukui, Japan ၅။ဘာအလုပ်ကိုလုပ်နေရပါသလဲ? အထည်ချူပ်လုပ်ငန်း ၆။ဘယ်အချိန်ကစပြီး ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေပါသလဲ? Apr 2020~ ၇။ဂျပန်လူမျိုးတို့နဲ့အတူ အလုပ်ကောင်းစွာ လုပ်နိုင်နေပါသလား? ဂျပန်လူမျိုးတို့နဲ့ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် ,ကိုယ်ကလဲ ဂျပန်စကား ကိုဆရာ့စီမှာ သင်တန်းတက်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုလဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေနိုင်ပါပြီ။ ၈။ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်အရေးကြီးဆုံးအ ကြောင်းအရာကဘာပါလဲ? ဂျပန်လူမျိုးတို့ ရဲ့ စကားကိုနားလည်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်,ဂျပန်စကားကိုနားမလည်ပါ က ဂျပန်လူမျိုးတို့နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ ရာ ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက ဂျပန်စကားရဖို့ ရာအရေးကြီးပါတယ်ရှင့်။ Enjoy and Subscribe our other Video. https://www.youtube.com/channel/UCp-C... ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStory... 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon # Speaking
【 Let's enjoy speak Japanese! 】"HAYAKUCHIKOTOBA"
Speak as fast as possible with music. Let's enjoy speak Japanese! Enjoy and Subscribe our other Video. https://ux.nu/eInHm ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon # Speaking
【 Best school ever! 】Students who graduate N4 class tell about Another Story Human Academy
Please "SUBSCRIBE" our channel, & LIKE Enjoy and Subscribe our other Video. https://www.youtube.com/channel/UCp-ChicebXsWdYpcYdB4NXQ ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon # Speaking
【採用決定済み】My experience at Another Story Human Academy　Shun Lae Wai
Another Story Human Academy ဂပြနျစာကြောငျး တှငျတကျရောကျခဲ့ပွီးရရှိခဲ့ သောအတှအေ့ကွုံမြား Shun Lae Wai Japanese version is here https://youtu.be/2UTF9Nga__M Enjoy and Subscribe our other Video. https://www.youtube.com/channel/UCp-ChicebXsWdYpcYdB4NXQ ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanAcademy/ Please "SUBSCRIBE" our channel, Thank you. ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。
ကျောင်းသားများ၏ စကားသံ Thu Zar Soe
၁။ Another story human academy သင်တန်း ကျောင်းတွင် ဘယ်အချိန်ကစပြီးဘယ်အချိန် ထိလေ့လာခဲ့ပါသလဲ? A: 2019 October -2020 February ၂။လေ့လာခဲ့ပါသော ဂျပန်စာ ၏ level က A: N4, N3 ၃။ဂျပန်စာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သော၊လေ့လာသင် ယူနေပါသော အကြောင်းပြချက်က? A: ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်သွားလုပ်ချင်သောကြောင့် ----------------------------------------------------------------------- ၄။အခုဂျပန်ရဲ့ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပါသလဲ? A: Fukui, Japan ၅။ဘာအလုပ်ကိုလုပ်နေရပါသလဲ? A: အထည်ချုပ် ၆။ဘယ်အချိန်ကစပြီး ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေပါသလဲ? A: 2020 March ~ ၇။ဂျပန်လူမျိုးတို့နဲ့အတူ အလုပ်ကောင်းစွာ လုပ် နိုင်နေပါသလား? A: ဟုတ်ကဲ့.. ​အတော်များများနားလည်ပြီးပြန်ပြောနိုင်လို့ချီးမွမ်းခံရ သောကြောင့်ပျော်ရပါတယ်... ဂျပန်စကားပါပဲ ၈။ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်အရေးကြီးဆုံးအ ကြောင်းအရာကဘာပါလဲ? A: ဂျပန်စကားကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်... Enjoy and Subscribe our other Video. https://www.youtube.com/channel/UCp-C... ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStory... 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon # Speaking
April Phoo ကျောင်းသားများ၏ စကားသံ
၁။ Another story human academy သင်တန်း ကျောင်းတွင် ဘယ်အချိန်ကစပြီးဘယ်အချိန် ထိလေ့လာခဲ့ပါသလဲ? A: 2019 December -2020 Now ၂။လေ့လာခဲ့ပါသော ဂျပန်စာ ၏ level က A: N5, N4(Now April 2020) ၃။ဂျပန်စာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သော၊လေ့လာသင် ယူနေပါသော အကြောင်းပြချက်က? A: ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်သွားလုပ်ချင်သောကြောင့် ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🔴YouTube တွင်ရှိပါသော another story human academy channel အား SUBSCRIBE လုပ်၍ရယူထားနိုင်ပါပြီ ခင် ဗျ။ 1️⃣ပထမ တချက်အနေဖြင့် YouTube တွင် another story human academy ကို search လုပ်ပြီးထွက်ရှိလာပါက video များတွင် SUBSCRIBE ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး 2️⃣ဒုတိယ တချက်အနေဖြင့် 🔔 ခေါင်းလောင်း လေး ကို နှိပ်လိုက်ပါ ခင်ဗျ။All, Personalized , နဲ့ None ဆိုပြီးထွက်လာပါမယ် ခင်ဗျ။ 3️⃣တတိယ တချက်အနေဖြင့် ALL နေရာလေး ကို နှိပ်ထားလိုက်ပြီးပါက နောက်ထပ်အသစ်သစ် သော စိတ်ဝင်စားစရာ video များကိုကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ ခင်ဗျ။ ★ Our Youtube Channel is Here https://bit.ly/2yNl1ck ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStory... 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon # Speaking
San wai aung ကျောင်းသားများ၏ စကားသံ
၁။ Another story human academy သင်တန်း ကျောင်းတွင် ဘယ်အချိန်ကစပြီးဘယ်အချိန် ထိလေ့လာခဲ့ပါသလဲ? A: April 2018 -Oct 2019 ၂။လေ့လာခဲ့ပါသော ဂျပန်စာ ၏ level က A: N5, N4, N3 ၃။ဂျပန်စာကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သော၊လေ့လာသင် ယူနေပါသော အကြောင်းပြချက်က? A: ဂပြနျနိုငျငံမှာအလုပျလုပျပီး ဂပြနျနိုငျမှာကောငျးမှနျတဲ့အတှကွေုံ့တှယေူပီး ကိုယျပိုငျအလုပျလေးတဈခုလုပျခငျြလို့ ----------------------------------------------------------------------- ၄။အခုဂျပန်ရဲ့ ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပါသလဲ? A: Chiba, Japan ၅။ဘာအလုပ်ကိုလုပ်နေရပါသလဲ? A: အထည်ချုပ်Car Work Shop ၆။ဘယ်အချိန်ကစပြီး ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေပါသလဲ? A: January 2020 ~ ၇။ဂျပန်လူမျိုးတို့နဲ့အတူ အလုပ်ကောင်းစွာ လုပ် နိုင်နေပါသလား? A: အခုဆိုရငျသူတို့ပွောတဲ့စကားကိုနားလညျပီး အလုပျမှာလညျးအမှားမရှိအစဉျပွပေါတယျသူ ၈။ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်အရေးကြီးဆုံးအ ကြောင်းအရာကဘာပါလဲ? A:သူတို့စကားကိုနားထောငျပီး ကိုယျကလညျး သတိထားလုပျကိုငျရမယျ သူတို့ကိုယျတိုငျကလညျးအလုပျကိုသခြောစှာ လုပျ ကွလို့ ကိုကလညျး သူတို့လို့ ဖဈအောငျ သတိထား လုပျရပါတယျ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🔴YouTube တွင်ရှိပါသော another story human academy channel အား SUBSCRIBE လုပ်၍ရယူထားနိုင်ပါပြီ ခင် ဗျ။ 1️⃣ပထမ တချက်အနေဖြင့် YouTube တွင် another story human academy ကို search လုပ်ပြီးထွက်ရှိလာပါက video များတွင် SUBSCRIBE ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး 2️⃣ဒုတိယ တချက်အနေဖြင့် 🔔 ခေါင်းလောင်း လေး ကို နှိပ်လိုက်ပါ ခင်ဗျ။All, Personalized , နဲ့ None ဆိုပြီးထွက်လာပါမယ် ခင်ဗျ။ 3️⃣တတိယ တချက်အနေဖြင့် ALL နေရာလေး ကို နှိပ်ထားလိုက်ပြီးပါက နောက်ထပ်အသစ်သစ် သော စိတ်ဝင်စားစရာ video များကိုကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ ခင်ဗျ။ ★ Our Youtube Channel is Here https://ux.nu/eInHm ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStory... 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 ＃Japanese Language # Another Story Human Academy # Myanmar # Yangon # Speaking
学校紹介 Athean Naing (M)
現在Staffで頑張っているAtheanさんも元は生徒でした。 頑張って自分の未来を変えました！！ Enjoy and Subscribe our other Video. https://ux.nu/eInHm ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 #Japanese Language #Another Story Human Academy #Myanmar #Yangon #Speaking #N5 #N4 #N3 #N2 #N1
【Learn from Successor 】 Aung Myo Kyaw
学校に来たときには何も話せなかった。 しかもめっちゃ緊張する彼。 日本語で話せないし、さらに人前で緊張して言葉が出ない。 でも、彼は２ヶ月チャレンジし続けました。毎日前に出て皆の前で話した。 できるまで頑張る人。できなくてもめげずにいつもチャレンジ。 成功とは 諦めないでやりつづけること。 彼に教わりました。 Car WorkshopのInterviewにも合格。自分で勝ち取った！！ そんな彼に話してもらいました。 Speak as fast as possible with music. Let's enjoy speak Japanese! Enjoy and Subscribe our other Video. https://ux.nu/eInHm ミャンマー・ヤンゴンにある日本語学校 Another Story Human Academy https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ 日本で働きたい人のための会話力の向上に力を入れています。 話せるミャンマー人を採用したいかた、 採用が決まった人の教育でお困りの方 FBページのコメントからご連絡を。 https://www.facebook.com/AnotherStoryHumanacademy/ ■ Address & MAP No.(92/94) GF 52 Street middle block, Yangon https://goo.gl/maps/DvXVZMiLgJynyx5HA TEL:+95 097 6905 9108 #Japanese Language #Another Story Human Academy #Myanmar #Yangon #Speaking #N5 #N4 #N3 #N2 #N1
No.(92/94) GF 52 Street middle block, Pazundawng, Yangon
©2020 by Another Story Human Academy。Wix.com で作成されました。